Barakac horleh oo ka bilowday xaafadaha galbeed ee Magaalada Baladweyne – SBC
Barakac horleh oo ka bilowday xaafadaha galbeed ee Magaalada Baladweyne
Posted by Webmaster on February 6, 2012 Comments
Dad goob joogayaal aoo ku sugan magaalada Baladweyne ayaa xafiiska SBC international ee magaalada GAroowe u xaqiijiyay in qeybo ka mid ah xaafadaha dhabka galbeed ee magaalada Baladweyne ay ka soconayaan Barakac aad u balaaran oo ay sameynayaan dadkii ku dhaqnaa.
Wararku waxay intaasi ku darayaan in dadweynaha iyagoo gaadiid ku rartay alaabihii ay isticmaalayeen ciyaalkoodiina ay gacmaha heystaan ay ka soo xaqayaan xaafadaha dhanka galbeed ee magaaladaas sida laanta heegan ee magaaladaasi.
Barakacan Cusub ayaa waxa uu ka dambeeyay ka dib markii haween dhoweyd halkaasi uu ka dhacay weerar iyo qaraxyo lala damacsanaa ciidamada Itoobiyaanka ah ee halkaasi fariisinka ka sameystay.
Waxaa la sheegay in dadku ay muujin cabsi iyo dhibaatooyin ka soo gaara weeraradaasi ka dib ay ku dhaqaaqeen qax balaaran iyagoona u qaxaya meelaha ay isleeyihiin waad kaga fogaankartaan dhibaatooyinka deegaanadii aad ku dhaqaneeydeen,
Ugu dambeyntii qeybaha kala duwan ee Bulshada iyo waxgaradka gobolka ayaa arimahani walaac ka muujiyay iyagoona sheegay in ay ka dhalan karto xaalado nololeed iyo arimo kale oo aan ku habooneen qofka biniaadanka ah.
Qaar ka mid ah dhalinyarada Baladweyne oo la hadlay Xafiiska SBC ee Garoowe waxa ay sheegeen in xaafadahoodii ay uga soo carareen baqdin dhanka ciidamada Itoobiyaanka ah ee halkaasi ku sugan, kuwaasi oo qab qabasho iyo baaris xoogleh kula dhaqaaqa xiliyada ay dhacaan weerarada lala beegsado.
SBC International Garoowe.